उम्मेदवार छनौटको विषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताबीच खुकुरी हानाहान, १० कार्यकर्ता घाइते - USNEPALNEWS.COM
उम्मेदवार छनौटको विषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताबीच खुकुरी हानाहान, १० कार्यकर्ता घाइते
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: September 6, 2017
स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनौटको विषयलाई लिएर सिराहमा कांग्रेस कार्यकर्ताबीच खुकुरी हानाहान भएको छ ।बुधबार पार्टी कार्यालयमा भएको खुकुरी हानाहानमा कांग्रेसका १० कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । सिराह नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसले पार्टी कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवको छोरा डा. सुवासचन्द्र यादवलाई उठाउने भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा पार्टी सचिव उपेन्द्र यादवले सुवाचन्द्रको विरोध गरेपछि विवाद सृजना भएको थियो ।यादवले सिरहा नगरपालिकामा मेयरको दाबी गरेका थिए । विवादले उग्ररुप लिँदा खुकुरी हानाहान भएको हो । घाइतेहरुको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अहिले घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति संजय प्रकाश यादवले मंगलवार साँझ पार्टी कार्यालयमा सिरहा नगरपालिकामा सिफारिस भएका वडा अध्यक्षहरुको लागि मनोयन पत्र लिन पुुगेका थिए । तर, उनलाई कार्यालयका सचिव रामबाबु यादवले दिएनन् । बुुधवार पुनः मनोयन पत्रका लागि जाँदा पनि कार्यालय सचिव रामबाबु यादवले विवाद गरेपछि झडप भएको सिरहा नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार डा. सुुभाषचन्द्र यादवले जानकारी गराएका छन् ।
बनमन्त्रीले पैसा बाँडेपछि प्रतिकार , जिल्ला छोडेर काठमाण्डौं पुगे
यूस नेपाल न्युज	 May 9, 2017
PM Oli congratulates Singaporean PM on reappointment
RSS	 July 27, 2020